[ , N'isi nke a, enwere m ezigbo obi ụtọ banyere mgbatị. Otú ọ dị, nke a anaghị eme ka atụmatụ dị mma mgbe niile. Dee ọnọdụ ebe post-stratification nwere ike ibelata ogo nke atụmatụ. (Maka ihe atụ, lee Thomsen (1973) .)
[ , , Chepụta ma mee nchọpụta na-abụghị nke puru omume na Amazon Mechanical Turk ka ị jụọ banyere egbe egbe na àgwà banyere egbe egbe. Ya mere ị nwere ike iji nyocha gị tụnyere ndị e nwetara site na ihe atụ gbasara omume, biko detuo ederede ajụjụ na nhọrọ nzaghachi site na nyocha dị elu dịka ndị na-eme site na Pew Research Centre.
Ogologo oge ole ka nnyocha gị mere? Ego ole ka ọ na-eri? Kedu ka ọnụ ọgụgụ nke sample gị si tụnyere nchịkwa nke ọnụ ọgụgụ ndị America?
Kedu ihe bụ ezigbo atụmatụ nke egbe gun site na iji ihe nlele gị?
Dezie maka ntụgharị ihe na-abụghị nke nlele gị site na iji post-stratification ma ọ bụ usoro ọzọ. Ugbu a, olee atụmatụ nke egbe gun?
Kedu ka ọnụego gị si jiri ya tụnyere atụmatụ kachasị ọhụrụ site na nlele nke nwere ike inwe? Kedu ihe ị chere na-akọwa nhụghachị ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị?
Tinyegharịa ajụjụ (b) - (d) maka àgwà gbasara njide egbe. Kedu ka nchọpụta gị dị iche?
[ , , ] Goel na ndị ọrụ ibe (2016) 49 ajụjụ dị iche iche na-achọpụta nke sitere n'aka General Social Survey (GSS) wee họrọ nyocha site na Pew Research Center na-abụghị ihe gbasara nke ndị nabatara si Amazon Mechanical Turk. Ha wee gbanwee maka ndị na-abụghị ndị nnọchiteanya nke data site na iji post-stratification na-eme ihe nlereanya ma jiri ya tụnyere ndị sitere na GSS na nnyocha ndị Pew. Dee otu nnyocha ahụ na Amazon Mechanical Turk ma gbalịa imepụtaghachi nọmba 2a na ọnụ ọgụgụ 2b site n'iji nyocha gị gbanwere na atụmatụ site na nsonye ndị GSS na nnyocha ndị Pew na-adịbeghị anya. (Lee ntụle isiokwu isiokwu A2 maka ndepụta nke 49 ajụjụ.)
Jiri ya tụnyere ndị si na Pew na GSS.
Tụlee ma tọọ anya na nsonaazụ gị na ndị sitere na nchọpụta Mechanical Turk na Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
[ , , ] Ọtụtụ ọmụmụ na-eji usoro onwe-akọ nke ekwentị mkpanaaka eji. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị nke ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji tụnyere omume onwe-akọwara na omume (lee eg, Boase and Ling (2013) ). Ụdị àgwà abụọ ịjụ banyere na-akpọ ma na-eziga ozi, na okpokoloji oge abụọ bụ "ụnyaahụ" na "n'ime izu gara aga."
Tupu ị na-anakọta data ọ bụla, nke nchịkọta akụkọ onwe gị ka ị chere na ọ bụ ihe ziri ezi karị? Ntak-a?
Chọta mmadụ ise n'ime ndị enyi gị ka ha nọrọ na nyocha gị. Biko jiri nkenke chịkọtara otú e si zụọ ndị enyi ise a. Usoro nlele a nke a nwere ike ime ka ị chọpụta ihe ị na-eme?
Jụọ ha ajụjụ microsurvey ndị a:
"Ugboro ole ka ị jiri ekwentị mkpanaaka gị kpọọ ndị ọzọ ụnyaahụ?"
"Ozi ole ederede ka ị zitere ụnyaahụ?"
"Ugboro ole ka ị jiri ekwentị mkpanaaka gị kpọọ ndị ọzọ n'ụbọchị asaa gara aga?"
"Ugboro ole ka ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị eziga ma ọ bụ nweta ozi ederede / SMS na ụbọchị asaa ikpeazụ?"
Ozugbo a mechara microsurvey a, jụọ ka ịlele data ha jiri dị ka ekwentị ma ọ bụ onye ọrụ ha. Kedu otu ejiji akụkọ onwe onye na-eji tụnyere data ndekọ? Kedu nke kachasị ezi, nke kachasị nta?
Ugbu a, jikọta data ị nakọtara na data site na ndị ọzọ na klas gị (ọ bụrụ na ị na-eme ọrụ a maka otu klas). Site na dataset a dị ukwuu, megharịa akụkụ (d).
[ , ] Schuman na Presser (1996) arụ ụka na iwu ajụjụ ahụ ga-abụ ihe dị mkpa maka ụdị ajụjụ abụọ: ajụjụ nke otu akụkụ ebe abụọ ajụjụ dị n'otu ọkwa (dịka, Ntụle nke ndị nnọchiteanya abụọ); na mkparịta ụka zuru oke ebe otu ajụjụ n'ozuzu jesiri ajụjụ a kapịrị ọnụ (dịka, ịjụ "Ị nwere afọ ojuju maka ọrụ gị?" soro "Olee otú afọ juru gị na ndụ gị?").
Ha na-ejikarị mara ajụjụ abụọ dị iche iche iji mee ka ọ pụta ìhè: mmetụta na-agbanwe agbanwe na-eme ma ọ bụrụ na ịzaghachi ajụjụ a na-eme n'ọdịnihu ka a ga - eme ka ha bịarukwuo nso (karịa ka ha ga - abụ) nye ndị e nyere ajụjụ mbụ; ọdịiche dị iche iche na-eme mgbe enwere nghọtahie dị ukwuu n'etiti ịza ajụjụ abụọ.
Mepụta otu ụzọ nke akụkụ akụkụ nke ị na-eche ga-enwe nnukwu ajụjụ iji rụọ ọrụ; otu uzo ozo di iche iche nke i chere ga - enwe ihe di nma; na otu ajụjụ ndị ị na-eche agaghị eche. Na-eme nnyocha nyocha na Amazon Mechanical Turk iji nwaa ajụjụ gị.
Kedu otu oke akụkụ akụkụ nke ị nwere ike ịmepụta? Ndi ama ọfọn ama?
Kedu otu nnukwu akụkụ nke ị nwere ike ịmepụta? Ndi ama ọfọn ama?
Enwere mbempe akwụkwọ iji mee ka gị na ụzọ gị na-echeghị na iwu ahụ ga-efu?
[ , N'ịbụ ndị na-arụ ọrụ na Schuman na Presser, Moore (2002) akọwa akụkụ dịgasị iche iche nke ajụjụ iji mee ka ọ pụta ìhè: mmetụ na mmetọ subtractive. Ọ bụ ezie na a na-emepụta ọdịiche dị iche iche na nhụghata na-agbanwe agbanwe site na nyocha nke ndị na-azaghachi ihe abụọ ahụ na-emetụta nke ọ bụla, nrụpụta na mmetụta subtractive na-emepụta ma ọ bụrụ na ndị na-anabata ya na-etinyekwu aka na nnukwu usoro n'ime ajụjụ ndị a. Na-agụ Moore (2002) , mezie ma mee nchọpụta nyocha na MTurk iji gosi mmụgharị ma ọ bụ mmetụta subtractive.
[ , Christopher Christopher Antoun na ndị ọrụ ibe ya (2015) duziri ọmụmụ ihe na-atụle ihe ntanetị dị iche iche na-enweta site na isi mmalite ntanetị dị iche iche dị iche iche dị na ntanetị: MTurk, Craigslist, Google AdWords na Facebook. Chepụta nyocha dị mfe na ndị nabatara ha site na ọ dịkarịa ala abụọ dị iche iche na-enweta isi mmalite na ebe nrụọrụ weebụ (ebe ndị a nwere ike ịdị iche na isi mmalite anọ eji na Antoun et al. (2015) ).
Jiri ego na oge - tụnyere isi ihe dị iche iche.
Tụlee ihe mejupụtara nke ihe atụ ndị sitere na isi mmalite dị iche iche.
Tụlee ogo nke data n'etiti ihe atụ. Maka echiche gbasara otu esi tụọ àgwà data site na ndị nabataghachi, lee Schober et al. (2015) .
Kedu ihe bụ isi iyi gị? Ntak-a?
[ N'ịgbalị ịkọwapụtara ihe ndị 2016 EU Referendum (ya bụ, Brexit), ỊGov-ụlọ ọrụ nyocha nke Ịntanetị-mere nyocha ntanetị ntanetị nke otu ihe dị ka mmadụ 800,000 na United Kingdom.
Enwere ike ịkọwa nkọwa zuru ezu banyere ụdị statistical YouGov na https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/. N'ikwu okwu siri ike, YouGov kewara ndị nhoputa ndi ochichi n'ime ụdị dabere na ntuli aka votu ntuli aka 2015, afọ, iru eru, okike, na ụbọchị nke nyochaa, yana ndi otu ha bi. Nke mbụ, ha jiri data anakọtara site na YouGov panelists iji chọpụta, n'etiti ndị mepụtara, ọnụ ọgụgụ nke ndị nke ụdị onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ votu. Ha mere atụmatụ na ụdị onye ọ bụla nwere ike iji akwụkwọ votu mee ihe site n'iji nkuzi Bọmbụ Ndị Britain (2015) (BES) nke afọ 2015, nyocha nke ihu na ihu na-aga n'ihu, bụ nke mere ka ọ dị mma site nchịkọta ntuli aka. N'ikpeazụ, ha mere atụmatụ na ole mmadụ nọ na ụdị onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ votu na votu a, nke dabeere na Ọnụ Ọgụgụ Ọgụgụ na Ọnụ Ọgụgụ Mmadụ Otu (na ụfọdụ ozi mgbakwunye sitere na isi mmalite data).
Ụbọchị atọ tupu ntuli aka ahụ, YouGov gosipụtara ụzọ abụọ maka ịhapụ. N'abalị nke ntuli aka, nghoputa ahụ gosipụtara na nsonaazụ ahụ dị oke nso ịkpọ oku (49/51 Nọgide). Ọmụmụ ihe ikpeazụ a na-eme kwa ụbọchị buru amụma na 48/52 na-akwado Ịnọgide (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). N'ezie, atụmatụ a egbughị ihe ikpeazụ (52/48 Hapụ) site na pasent anọ.
Jiri nyocha usoro nyocha zuru ezu nke a tụlere n'isiokwu a iji chọpụta ihe gaara aga ezighi ezi.
Nzaghachi omume YouGov mgbe ntuli aka (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) kọwara: "Nke a yiri na nnukwu akụkụ ruru redout-ihe ọ bụla anyị ekwuchara na ọ ga-abụ ihe dị oké mkpa maka ihe ga-esi na ya pụta. Ihe nlereanya anyị na-atụgharị na-adabere na, ma ọ bụrụ na ndị na-azaghachi a tozuru oke na nhoputa ndi ochichi ikpeazụ na ọkwa dị elu karịa nke nchịkọta ntuli aka iweghasị ihe nlereanya ahụ, karịsịa na North. "Nke a ọ gbanwere azịza gị maka akụkụ (a)?
[ , ] Dee ihe nkoghari iji gosi onye ọ bụla n'ime ihe nnọchiteanya ihe ngosi ahụ na ihe osise 3.2.
Mepụta ọnọdụ ebe njehie ndị a na-emecha kpochapụ.
Mepụta ọnọdụ ebe njehie na-emegiderịta onwe ha.
[ , ] Nyocha nke Blumenstock na ndị ọrụ ibe (2015) gụnyere ịmepụta ihe nyocha ngwa ngwa nke nwere ike iji data nyocha data ịkọ amụma nyocha. Ugbu a, ị ga-anwale otu ihe ahụ na dataset dị iche. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) chọpụtara na mmasị Facebook nwere ike ịkọwa àgwà na àgwà mmadụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, amụma ndị a nwere ike ịdị ọbụna karịa ndị enyi na ndị ọrụ (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Gụọ Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , na nke a na-edegharị aha ha. Ha nwere ike ịnweta na http://mypersonality.org/
Ugbu a, mechie ọnụ ọgụgụ nke atọ.
N'ikpeazụ, gbalịa mee ihe ha na-eme na Facebook: http://applymagicsauce.com/. Kedu ka o si arụ ọrụ maka gị?
[ ] Toole et al. (2015) jiri ederede oku (CDRs) site na ekwentị mkpanaka ịkọwa nchịkọta ọrụ na-enweghị ọrụ.
Jiri ma tụọ ihe nyocha nke Toole et al. (2015) na nke Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Ùnu chere na CDR ga-eji dochie anya nyocha ọdịnala, kwado ha ma ọ bụ ghara iji ha mee ihe maka ndị gọọmentị ọchịchị iji soro enweghị ọrụ? Ntak-a?
Olee ihe akaebe ga - eme ka i kwenye na CDR nwere ike iji dochie usoro omenala nke enweghị ọrụ?